‘लुट–२’ ले ‘छक्का पञ्जा’ को रेकर्ड तोड्यो, दुई दिनमा कमायो तीन करोड ! - Setoparewa Setoparewa
फागुन १५ गते २०७३
‘लुट–२’ ले ‘छक्का पञ्जा’ को रेकर्ड तोड्यो, दुई दिनमा कमायो तीन करोड !
‘लुट—२’ ले दुई दिनमा ३ करोड भन्दा धेरैको कलेक्सन गरेको छ । फागुन १३ गते शुक्रबार रिलिज भएको सिनेमा ‘लुट–२’ ले सुरुवाति दुई दिनमै तीन करोडको कारोबार गर्दै दुई दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै कमाउने सिनेमा बनेको छ । शिवरात्रीको अवसर पारेर रिलिज गरिएको सिनेमा अहिले काठमाडौंका सबै हलहरु र काठमाडौँ बाहिरका ८० वटा हलमा चलिरहेको निर्माता नरेन्द्र महर्जनले जानकारी दिएका छन् । महर्जनले शुक्रबार सिनेमाले कमाएको वास्तविक तथ्य नबाहिरिएको तर शनिबार सिनेमाले एक करोड ५० लाखभन्दा माथिको व्यापार गरेको बताएका छन् ।
तर ‘लुट–२’ ले दुई दिनमै तीन करोड भन्दा धेरैको व्यापार गरेर छक्का पञ्जालाई पहिलो स्थानबाट रिप्लेस गरेको छ । त्यस्तै ‘लुट–२’ को ट्रेलर र गीतले पनि छोटो समयमै धेरै दर्शक पाएर छक्का पञ्जाको रेकर्ड तोडिसकेको छ । स्मरण रहोस् यस अघि लुटले नेपाली सिनेमाको इतिहासमा सबै भन्दा धेरै कमाउने सिनेमाको नाममा कीर्तिमान कायम गरेको थियो ।